Bhaibheri Rinoti Chii Nezverusununguko Rwokusarudza? | Mibvunzo yeBhaibheri
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Assamese Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bambara Bislama Bissau Guinean Creole Bulgarian Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish French Georgian German Greek Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikamba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Korean Lingala Lithuanian Luganda Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Myanmar Nepali Norwegian Nzema Ossetian Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tsonga Turkish Turkmen Ukrainian Umbundu Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Mwari Ndiye Anogara Aronga Zvinhu Zvose Zvinozoitika Here?
Mwari anotiremekedza nokutipa simba rokusarudza zvatinoda panzvimbo pokuti agare akaronga zvichazoitika muupenyu hwedu. Ona zvinodzidziswa neBhaibheri.
Mwari akasika vanhu nemufananidzo wake. (Genesisi 1:26) Isu takasiyana nemhuka pakuti kufanana neMusiki wedu tinogona kuratidza unhu hwakadai serudo uye kubata vamwe zvakanaka. Uye kungofanana neMusiki wedu takasununguka kusarudza zvatinoda.
Zvatinoita zvinogona kutema zvichazoitika mune ramangwana. Bhaibheri rinotikurudzira kuti ‘tisarudze upenyu nokuteerera inzwi raMwari,’ zvichireva kusarudza kuteerera mirayiro yake. (Dheuteronomio 30:19, 20) Hwaizova utsinye kuudza munhu kuti sarudza zvaunoda kuita nepo iye asina rusununguko rwacho. Panzvimbo pokutimanikidza kuti tiite zvaanenge ataura, Mwari anotikumbira nerudo achiti: “Haiwa kudai waizoteerera mirayiro yangu! Rugare rwako rwaizoita sorwizi.”—Isaya 48:18.
Kubudirira kwatinoita muupenyu kana kuti kusabudirira hazvirevi kuti ndiMwari akagara azvironga. Kana tichida kubudirira kuita chimwe chinhu tinofanira kushanda nesimba. Bhaibheri rinoti: “Zvose zvinowana ruoko rwako kuti ruite, zviite nesimba rako rose.” (Muparidzi 9:10) Rinotiwo: “Zvirongwa zvomunhu anoshingaira zvinobatsira.”—Zvirevo 21:5.
Rusununguko rwatiinarwo pakusarudza chitori chipo chinobva kuna Mwari nokuti rwunoita kuti timude ‘nomwoyo wose,’ nemhaka yokuti ndizvo zvatinenge tasarudza kuita.—Mateu 22:37.
Mwari Tsika Uye Mararamiro Mibvunzo yeBhaibheri Inopindurwa
Ko kana uchitenda muna Mwari asi usinganzwi uri pedyo naye?
Munhu Ane Zuva Rokufa Raakatarirwa Here?